Kalsoonida Nafta W/Q: Hassan Mudane | Laashin iyo Hal-abuur
Kalsoonida Nafta W/Q: Hassan Mudane
Kalsooni waa dareenka aad ka qabto naftaada ama waa waxa aad ka rumeysan tahay naftaada. Haddaad isku aragto qof aan wax qabsan karin, nolosha ka dhacsan, ayaan daran, sidoo kalena aad naftaada ka qabto aragti taban oo baqdin iyo saluug badan ku jiro qofnimadaada ogow waxaad noqonaysaa col hortiis jabay! Adiga iyo guuli isma arki doontaan waayo guusha waxay u martisaa qofka naftiisa ku kalsoon.
Kalsoonida nafta waa lafdhabarta guusha haddii aysan kalsooni jirin way adag tahay in aad si qurux badan u guulaysato. Dhanka kale, kalsooni darrada iyadana waxay lafdhabarka ka jebisaa guusha waxay kaa dhigtaa qof aan dhaqaaqi karin waayo waxay kugu beeraysaa cabsi aan jirin hamrasho aadan tahli karin wax badan waxay ku farreysaa werwer iyo walaahow kaa gala waxaad is leedahay ku dhaqaaq “ Ma qaban kartid,wey adagtahay, wey culustahay, dadkaa kula yaabaya, suurtagal maaha “ Farriimaha waa kuwo kugu ridaya walaac aad dib uga gurato hayaankaagi iyo higsigaagii qofeed. Kalsooni darrada waxay mararka qaar saameyn ku yeelataa nolosha qoyska, shaqada iyo waxbarashada. Hdadaad tahay ruux jilcan oo aan naftiisa ku kalsooneyn, way kugu adkaanaysa sidii aad u maarayn lahayd dhibaatooyinka ku soo food saara. Una fiirso maskaxda Aadanaha waxay inta badan isku hawshaa uruurinta farriimaha taban.
Si kastaba, guusha iyo guul darrada maahan wax mar kaliya iska dhaca ee waa dhaxalka dadaal socday ammin badan, markaad diido in ay ku hakiyaan meertooyin iska horyimid oo weerar joogta ah ku haya yoolkaaga, la seexato kuna soo toosto markaas ayay duluc weyn yeelanaysaa kalsoonida nafta. Ha ku hodmin wax yar oo dhalanteed ah balse noqo qof hankiisu weyn yahay oo yool leh iskana ilaali malaha iyo muhmal badan, waayo wuxuu keenaa kalsooni darro keeni karta guul darro. Ogowna haddaad doonayso in aad la duusho shimbirka hawada sare maraya ammin badan yeysan kaaga lumin digaagga dhulka hoose socda! Waa halku kala lahaa Cabdiraxiin Hilowle Galayr
Kaskana waynahaa baxsha
Kalsoonidu waa hoggaan